Library and Information Studies Course | LAPG
Dr. Naw Mercy See Sein Soe
Library Training Instructor
“စာကြည့်တိုက် နှင့် သုတပညာ (Library and Information Studies Course)”
သင်ဟာ စာအုပ်စာပေတွေကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး သုတပညာနဲ့သတင်းအချက်အလက်ပညာကို စနစ်တကျလေ့လာချင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် LA Professional Group ကထပ်မံဖွင့်လှစ်တော့မယ့် စာကြည့်တိုက် နှင့် သုတပညာ (Library and Information Studies) အွန်လိုင်းတန်းခွဲသစ်လေးက စောင့်ကြိုလျက်ရှိပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေက တစ်ဖြည်းဖြည်းများပြားစုပုံလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို သတင်းအချက်အလက်တွေကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားသိုတတ်ဖို့နဲ့ စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့က အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်လည်းဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒါအပြင် ကိုယ်ပိုင်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖြစ်စေ စာကြည့်တိုက်နဲ့ Resource Center တွေတည်ထောင်ချင်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့ သင်တန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ပတ်၀န်းကျင်နဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထ များပြားလာဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကတော့ စာကြည့်တိုက်ပါပဲ။
စာကြည့်တိုက်မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့စာပေတွေကို လေ့လာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး စာပေချစ်မြတ်နိုးတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေထွန်းကားလာနိုင်ဖို့ စာကြည့်တိုက်လေးကနေ အစပြုကြရပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီး အိမ်တွင်းစာအုပ်အနည်းငယ်နဲ့အစပြုစုဆောင်းလာတဲ့စာကြည့်တိုက်လေးကနေ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး သတင်းအချက်အလက်စုံလင်တဲ့ စာကြည့်တိုက်ရှိရာအထိ အဆင်မပြတ်ပဲလေ့လာနိုင်ဖို့လိုအပ်လှပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာကြည့်တိုက်ပညာနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အကျိုးကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဗဟုသုတနဲ့ ပညာရပ်များကို “စာကြည့်တိုက် နှင့် သုတပညာ (Library and Information Studies)” အွန်လိုင်းတန်းခွဲသစ်ကနေ သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁/ စာကြည့်တိုက်တခုထူထောင်ရာတွင် စီမံကိန်း (Plan) များ ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည် ဖော်လာနိုင်ပါမယ်။
၂/ စာကြည့်တိုက်တခုမှာ ရှိရမည့် မူဝါဒများကို ချမှတ်ပီး စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ်လာပါမယ်။
၃/ စာကြည့်တိုက်တခုရဲ့ စာပေအရင်းအမြစ်များကို ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒနှင့်အညီ မှန်ကန်စွာ စုဆောင်း တတ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူ စာရှာသူတို့ လိုအပ်ချက်အညီ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလာနိုင်ပါမယ်။
၄/ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်နှင့်အညီ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်များကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ် စုဆောင်းတတ်လာပါမယ်။
၅/ ထိုသတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်များကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်လျက် စီမံခန့်ခွဲ ထိန်းသိမ်း တတ်လာမှာဖြစ်ပြီး စာရှာသူတို့ လိုအပ်ချက်ကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြန့်ဖြူးတတ်လာမှာပါ။
၆/ ၄င်းအပြင် သုတေသနနှင့်ပတ်သက်သည့် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စာပေအရင်း အမြစ်များကို စနစ်တကျ စုဆောင်း ထိန်းသိမ်းတတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
• Information Centre များ
• ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းစာကြည့်တိုက်များနှင့်
• သုတေသနဌာနများ မှာအလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးများ ရလာနိုင်ပါမယ်။
သင်တန်း‌ကြေး- ၆၅၀၀၀ ကျပ်
သင်တန်းကာလ – ၆ ပတ်
သင်တန်းနေ့ရက် – စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေ
သင်တန်းချိန် – ညနေ ၅:၀၀ မှ ၇:၀၀ နာရီ
သင်တန်းစမည့်ရက် – 12. 6. 2021
သင်တန်းပြီးဆုံးမည့်ရက် – 18. 7. 2021
သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ကိုပူးတွဲသင်ကြားပေးမှာပါ။ စာမေးပွဲထက်လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရင်းတတ်မြောက်သွား အောင်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Online သင်တန်းဖြစ်ပေမယ့် ဆရာ/မ နဲ့ တိုက်ရိုက် သင်ကြားပို့ချမှုရှိပြီး Zoom နဲ့ video conferencing လုပ်ပြီးသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ/မ နဲ့တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးနိုင်ပြီး ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျူတာ ရှိရင် အဆင်ပြေပြေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် LA Professionals Group ရဲ့ online learning platform ကနေတဆင့် online class ကိုဖွင့်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတိုင်း ကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုစီ နဲ့ ဆရာ/မရဲ့ ပို့ချချက်များ၊ PowerPoint များနဲ့ ဖတ်စရာများကို တင်ထားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အင်တာနက်ရှိရုံ နဲ့ သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ နော်မားစီစည်းစိမ်စိုး Dr. Naw Mercy See Sein Soe ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဟာဆိုရင် PhD (ပါရဂူဘွဲ့) ကို စာကြည့်တိုက်နှင့် သုတပညာ နဲ့ရရှိထားပြီး စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဓမ္မတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Holy Cross Theological College တွင် ၁၅ နှစ်ကြာ ပညာကုသိုလ်ပြု နေရင်း တဖက်မှာလဲ စာကြည့်တိုက်ပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မီဒီယာ နှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာသိနားလည်မှု Special Talk ပြောကြားခြင်း စာတမ်းပြင်ပ စာစစ်လုပ်ပေးခြင်း (Master Thesis examiner & PhD Thesis Referee) အပြင် မဟာတန်းကျောင်းသားများအတွက် အကြံများပေးခြင်းအပြင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာများအားဘာသာပြန်ဆိုပေးခြင်း လုပ်ငန်းများလဲ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။